पुष्पले फ्यान कहिले रिझाउने हुन् - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
पुष्पले फ्यान कहिले रिझाउने हुन्
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय कुनै अभिनेताको चर्चा छ भने त्यसमा पुष्प खड्काको नाम पनि आउँछ । ‘अझै पनि’, ‘दर्पण छायाँ २’, ‘मंगलम’, ‘दाल भात तरकारी’ र ‘मारुनी’सम्म आइपुग्दा पुष्पले राम्रै फ्यान कमाएका छन् । फिल्म मंगलमबाट पुष्प लाइमलाइटमा आए ।
आधा दर्जन फिल्ममा देखा पर्दासम्म पुष्पले सम्झनलायक फिल्म दिन सकेका छैनन् । उनको पारिश्रमिकको माग भने सुपरस्टारको रेट बराबरकै छ । उनी पारिश्रमिकको कारणले पनि चर्चामा आउने गर्छन् । एक फिल्मको लागि उनले तीस लाख पारिश्रमिक माग गरेको बताएका थिए । तर उनको अभिनय र उनी अभिनित एकाध बाहेकका फिल्मले दर्शक रिझाउन र निर्माताको खल्ति भर्न भने सकेको छैन ।
उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘मारुनी’ले दर्शक रिझाउन सकेन । ‘दाल भात तरकारी’ ले प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाए पनि त्यसको पुरा क्रेडिट पुष्पलाई जाँदैन । फिल्महरु असफल हुँदै जाने हो भने् तीस लाखको माग त ‘पाउको मासुलाई धार्नेको मसला’ भनेजस्तै होला नि पुष्प जी ! तर, यस्तो नहोस् है । उनको आगामी फिल्महरुले फ्यानहरुलाई निराश नबनाओस् । उनका फिल्मले फ्यान कहिले रिझाउला ? प्रतिक्षा गरौँ ।